UP NEXTसुर्खेत डायरी
अढाई वर्षमा अनुभूति हुने गरी विकासः थानी
सुर्खेत, २५ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री हृदयराम थानीले कांग्रेसले जिते अढाई वर्षमै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । सुर्खेत क्षेत्र नं.२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार समेत...
कामको मूल्याङ्कनसहित भोट : खड्का
सुर्खेत, २५ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले काँग्रेसको नेतृत्वमा विगतमा भएका विकास निर्माणका कामहरुलाइ मूल्याङ्कन गरि आगामी निर्वाचनमा पनि जिम्मेवारी सुम्पिन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधी सभाका लागि...
दैलेखमा गाडी दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, १६ घाइते
सुर्खेत, २५ कात्तिक । दैलेखमा गाडी दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । सुर्खेतदेखि दैलेख जाँदै गरेको देउती यातायात नागारिक यातायात प्रालिको बा ४ ख ५०१० नम्बरको हाईस दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नं. ४ सियाकोटमा शक्रबार दुर्घटना हुदाँ ३ जनाको मृत्यु भएको हो ।...
अाजदेखि ठाँटी मेला शुरु
सुर्खेत, १८ कात्तिक । सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकास्थित मटेला ठाँटीमा लाग्दै आएको पूर्णीमा मेला आज (शनिबार)देखि शुरु भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ शाखा कार्यालय चिङगाडको आयोजना तथा गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा संचालन भएको मेला २२ गते सकिने छ । मेलामामा...
दल तथा उम्मेदवारहरु जुटे निर्वाचन प्रचारमा
सुर्खेत, १८ कात्तिक । अासन्न प्रदेश र प्रतिनिधी सभा निर्वाचनका लागि दलहरु प्रचारप्रसारमा जुटेसंगै सुर्खेतमा पनि उम्मेदवारहरु प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । निर्वाचनका लागि सुर्खेतमा उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेताहरु गाउँ पसेका छन् । सुर्खेत क्षेत्र नं. २ का...
तिहार विदामा रहेका शिक्षक काममा नफर्किदा पढाइ प्रभावित्
जाजरकोट, १८ कात्तिक । दशै तिहार विदाामा बसेको शिक्षकहरु नियमित कामकाजमा नफर्किँदा जाजरकोटका अधिकांश विद्यालयको पढाइ प्रभावित भएको छ । तिहार बिदा सकिएको २ साता बितिसक्दा समेत शिक्षकहरु बिद्यालय नआउँदा पठनपाठन प्रभावित भएको हो । यस बर्षको एसईई परिक्षा नजिक...
जीप दुर्घटना : २ को मृत्यु, १८ घाइते
सुर्खेत, १५ कात्तिक । सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यू भएको छ । दुर्घटनामा १८ जना घाइते भएका छन् । बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा न ८ स्थित रिठाघारीमा आज भे १ ज ९२७ नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा २ जनाको घटना स्थलमै मृत्यू भएको जिल्ला प्रहरी...
संघीय संरचनाअनुसार कृषिसंग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चलनमा कठिनाई
पूर्व गृहमन्त्रीलाई मातृ शोक
७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न
श्रीमतिले पाेलेर खाइन् श्रीमानका चार अाैँला
Copyright 2017 Radio Surkhet . All Right Reserved.